« Sorogno Cacao » 2016 : fihaonamben’ny kolontsaina | NewsMada
« Sorogno Cacao » 2016 : fihaonamben’ny kolontsaina
Olona 1.000.000 no andrasana ! Anisan’ny fanamby goavana nambaran’ny mpikarakara ny Festival « Sorogno Cacao » andiany faha-17 io, omaly. Ny 7 septambra ka hatramin’ny 11 septambra izao, no hanatontosana ity hetsika fihaonamben’ny toekarena sy kolontsaina ity any Ambanja. Ho an’ny tontolon’ny kolontsaina, fotoana hanehoana ireo fomba amam-panao avy any amin’iny faritr’i Sambirano iny ny « Sorogno cacao » 2016, raha ny fanazavan’ny mpandrindra ankapobeny eo anivon’ny ONG Sorogno, mikarakara ity « festival » goavana be ity. Iray amin’izany ny fanatanterahana ny « Tsinjaka Sambirano » izay fifaninanana maneho ny soradihy nentin-drazana. Ny « Talenta vao », hitiliana ireo mpanakanto tanora manan-talenta kanefa mbola tsy fantatra ny fisiany. Mpanakanto manana ny maha izy azy ihany koa ny hanafana ny hetsika ao anatin’ireo dimy andro ireo. Anisan’izany i Black Nadia, Dady Love, Rity Bako avy any Mayotte, Zandry Ahmed, Jerry Marcos, Groupe Sisca, tarika Wawa, miampy ireo tarika avy ao an-toerana.
Eo amin’ny tontolon’ny toekarena, mandritra ny festival « Sorogno cacao » 2016 no handinihan’ireo mpandraharaha sy ny mpiara-miombon’antoka ary ny fitondrana ny paikady hoenti-mampandroso iny faritra iny. Hotanterahina amin’ny alalan’ny fifanakalozan-kevitra sy fikaonandoha samihafa izany. Hahazo vahana kokoa amin’izany ny fomba hanomezana aina vao indray ny voly sy ny mpamboly cacao manomboka izao. Na izany aza, ho voadinika ao ihany koa ny voly sasany toy ny vanila izay mampalaza ihany koa iny faritra iny.
Hampahafantarina amin’ireo hanatrika ity festival ity ihany koa ny fananan’Ambanja sy ny faritra Diana toeram-pitsangantsanganana tsara, toy ny torapasika, ranomafana voajanahary ary ny riandrano.
Fantatra fa handeha mivantana amin’ny youtube sy facebook ny hetsika rehetra mandritra ity « Sorogno cacao » andiany faha-17 ity. Hanana anjara toerana amin’ny alalan’ny fifaninanana fahaizana manamory « moto » ihany koa ny tontolon’ny fanatanjahantena.